Ampitadiavana ‘Mpanao Gazety Sahisahy’ ao Espaina Hanadihady ny Dinam-Barotra TTIP · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2015 2:32 GMT
Ny ahiahy voalohany ajoron'ireo vondron'olona manohitra ny Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) [Fiaraha-Miasa ara-Barotra sy ara-Pampiasambola Manavatsava an'i Atlantika] eo amin'i Eoropa sy Amerika Avaratra dia ny tsy fisian'ny mangarahara sy ny fiantraikan'ny fifanarahana eo amin'ireo vondrom-piarahamonina tafiditra.
Ao Madrid, Espaina, ny Asamblea Popular de Tres Cantos (Antenimieram-Bahoakan'i Tres Cantos), vondrona iray malaza tamin'ny fandraisana anjara hetsi-panoherana ny krizy ara-toekarena, dia “eo am-pitadiavana mpanao gazety sahisahy” ho antso amin'ny mpampita vaovao mba hanadihady ny fifanarahana.
Tamin'ny fanombohan'ny volan febroary, nanomboka nanao ireo andiam-pifampiraharahana nisy fizarana valo momba nb TTIP ireo andrimpanjakana Eoropeana sy Amerikana. Hatramin'ny fotoana 2012 namelarana ny fifanarahana, dia tao anaty efitrano mihidy sy ambany tsindrin'ny sehatra indostrialy iraisampirenena hatrany no nanatontosana ny fifampiraharahana, hoy ny fikambanana sivika sy ny olompirenena avy amin'ny sisiny roa manamorona an'i Atlantika.
Nampivondrona ny heriny ny antoko politika, ny hetsika sy ny fikambanana ara-piarahamonina espaniola isankarazany hitaky mangarahara bebe kokoa momba ny fifampiraharahana ao amin'ny dina tamin'ny fananganana ny sehatra “Tsy ekena ny TTIP” (#NoalTTIP). Iray amin'ny fandraisana an-tanana an-tserasera natao ny fifaninanana sary, izay nahazoana fitomboan'isan'ny sary avy ao amin'ny Zaridainam-pambolen'ny fokonolon'i Cantarranas :
Ny TTIP, na “Ahoana ny fomba hivarotana ny fanahinao amin'ny devoly” https://t.co/Kh9eQFJcfV by @ecanrog #TTIP pic.twitter.com/NM6Nd1EXAq
Inona ny “Fepetram-Pironan'ny” #TTIP? Fantaro ny fandrimpandriky ny fifanarahana http://t.co/uNN5oJYIVa via @lamarea_com #TTIPSecret #NoalTTIP
@TeresaRodr_ Fitanana an-tsoratry ny fitakiana hahazo ny tahirinkevitry ny #TTIP natolotra ny mpanelanelana Eoropeana #NoalTTIP http://t.co/aZ4gx7FO8A